မြေမြှုပ်မိုင်း ရှင်းလင်းရေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း | ဧရာဝတီ
မြေမြှုပ်မိုင်း ရှင်းလင်းရေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုက်တွန်း
ကြယ်ပြာ| January 22, 2013 | Hits:1,179
1 | | ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်နေသော မြေမြှုပ်မိုင်း ဒဏ်သင့် ဒေသခံများ(ဓာတ်ပုံ – ကြယ်ပြာ/ဧရာဝတီ)
ပဲခူးတိုင်း ကျောက်ကြီး နှင့် မုန်းမြို့ အကြားတွင် စစ်ပွဲလက်ကျန် မြေမြှုပ်မိုင်းများ ရှင်းလင်းရေး ဆောင်ရွက်ရန် အစိုးရ နှင့် ကရင် အမျိုးသား အစည်းအရုံး(KNU) တို့အား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တိုက်တွန်း ပြောဆို လိုက်သည်။
ဇန်န၀ါရီ ၂၀ ရက်နေ့က ကျောက်ကြီးမြို့တော်ခန်းမနှင့် KNU ဆက်ဆံရေး ရုံးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါင်းဆောင်သော လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အုပ်ချူပ်ရေး ပိုင်းမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ KNU အဖွဲ့၊ မြေမြှုပ်မိုင်းသင့် ပြည်သူများ နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ရာ၌ ယင်းသို့ ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
တံခါးပိတ် ကျင်းပသော ထိုတွေ့ဆုံပွဲတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က နှစ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ အား လက်ကျန် မြေမြှုပ်မိုင်းများ အမြန်ဆုံး တူးဖော်ပေးရန်၊ အစိုးရအနေဖြင့်လည်း ခြေတုလက်တု မရှိသေးသူများကို ပြုလုပ် ပေးရန်၊ ပျက်စီးနေသော ခြေတု လက် တုများကိုလည်း အသစ် ပြုလုပ်ပေးရန်၊ မသန်စွမ်းဖြစ်နေသူများအတွက် အလုပ်အကိုင် ရှားပါးမှုများကိုလည်း ဖြေရှင်းပေးရန် ပြော ဆိုခဲ့ကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်(NLD) မှ လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးမြင့်ဦး က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ကျောက်ကြီး မြို့နယ် အုပ်ချူပ်ရေးမှူးက ပြန်လည် ဆွေးနွေးရာတွင် KNU နှင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရုံ အဆင့်သာရှိပြီး အစိုးရ အထက် ပိုင်းမှ ခွင့်ပြုချက် မရသေးသည့် အတွက် လတ်တလော မိုင်းရှင်းလင်းရေး လုပ်ရန် မဖြစ်နိုင်သေးကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
“ဒုက္ခရောက် နေသူတွေရဲ့ဘ၀ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကာကွယ်ပေးဖို့၊ သူတို့ ဘ၀ပြန်လည် ရှင်သန်နိုင်ရေး ကူညီပေးဖို့ အုပ်ချူပ်ရေးမှူး ကို ကျမ ပြောခဲ့ပါတယ်”ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ခန်းမအပြင်ဘက်တွင် စောင့်ဆိုင်းနေသော မိုင်းဒဏ်သင့် မသန်စွမ်းများကို အားပေး စကား ပြောကြားခဲ့သည်။
မုန်းမြို့နှင့်ကျောက်ကြီးမြို့နှစ်မြို့ပေါင်း မသန်စွမ်းသူ ၃၃၃ ဦးခန့်ရှိကြောင်း သိရသည်။
မိုင်းများ မြှုပ်နှံထားသည့် နေရာမှာ တောင်များပေါ်တွင် ဖြစ်ပြီး ဒေသခံတို့၏ ဥယျာဉ်ခြံများ မှာလည်း တောင်များပေါ်၌ပင်ဖြစ်ရာ လူကြီးများသာမက ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခူးသော ကလေးများလည်း မကြာခဏ မိုင်းနင်းမိ ပေါက်ကွဲမှုများ ဖြစ်တတ်ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
“ကလေးတွေ တောင်ပေါ်တက်သွားရင် မိုင်းကွဲသံများ ကြားရတော့မလားလို့ တချိန်လုံး စိတ်ပူနေတာ၊ ညနေအိမ်ပြန်လာမှ ဟင်းချနိုင်တယ်”ဟု မြေမြှုပ်ဗုံး ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ညာခြေထောက် ပြတ်နေသူ ဒေါ်လုံးတုံးက ဆိုသည်။
၂၀၀၇၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်က မြို့နယ် အုပ်ချူပ်ရေး အဖွဲ့က မသန်စွမ်းများ စာရင်း ကောက်ခံခဲ့သော်လည်း မည်သို့မျှ အကြောင်း မထူး ခဲ့ကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာ ကြက်ခြေနီ အသင်း(ICRC) ကနေ စရိတ် စိုက်ထုတ်ပြီး ဗုံးထိသူများ အား ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့တောင်ကလေး ဆေးရုံသို့ ခေါ်ယူ၍ ခြေတုလက်တုများ တပ်ဆင်ပေး ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
မွန်ပြည်နယ် မော်လမြိုင်မြို့ ပြည်နယ်ခန်းမ၌ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ၂၂ ရက်နေတွင် ကျင်းပသည့် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အင်အားစုများ အတွက် အရေးပေါ် အထောက်အပံ့ ပစ္စည်များ ပေးအပ်ပွဲတွင် သမ္မတရုံး ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ပြည်နယ် တိုင်း ဒေ သကြီး အသီးသီး၌ မြေမြှုပ်မိုင်း ရှာဖွေရှင်းလင်းခြင်းများ လုပ်ဆောင်မည်ဟု ပြောကြားသည်။
၂၀၁၂ ဇန်န၀ါရီ ၁၂ ရက်နေ့က ဘားအံမြို့တွင် KNU နှင့်အစိုးရတို့ ပထမအကြိမ် ပြည်နယ်အဆင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ် ထိုး ခဲ့ပြီးနောက်တွင် ပဲခူးတိုင်း ကျောက်ကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်း ထားဝယ်၊ ဘုရားသုံးဆူနှင့် မြ၀တီ မြို့နယ်များတွင် ဆက်ဆံရေး ရုံးများလည်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
ဗုံးကွဲမှုကို မကျေနပ်သဖြင့် မြန်မာ – အိန္ဒိယ ဝင်ပေါက်များကို မိုးရေးသူများ ပိတ်ဆို့
တိုင်းရင်းသား ဘာသာစကားဖြင့် ထုတ်ဝေသည့်ဂျာနယ်များ အရှုံးပေါ်နေ
အင်းလေး ရေထုညစ်ညမ်းမှုကြောင့် ဒေသခံများ အရေပြားရောဂါ ဖြစ်ပွား
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ January 23, 2013 - 3:32 am	မြေဇာပင်တွေ။ သူတို့ဘ၀ အဆင်ပြေစေဘို့ကျတော့ နိုင်ငံတော် အစိုးရမှာ ဘာမှ အစီအစဉ် မရှိဘူး။
Reply	Nwar Kyaungthar January 23, 2013 - 11:17 am	The fairy is becomingawitch. The Lady is becomingananny of Thein Sein. The Beauty is becoming the beast.
ချစ်သမီးကို အသရေဖျက်မှုနှင့် တရားစွဲဆိုမှု ပယ်ဖျက်ရေး တရားရုံးပယ်ချ
မိုင်းရှူးမြို့တွင် တရက်ထဲ ဗုံးပေါက်ကွဲမှု ၂ ကြိမ်ဖြစ်ပွား
စစ်ပွဲများရပ်တန့်ရေး ကူညီရန်မေးခွန်း လွှတ်တော် အကြောင်းပြန်ကြားမှုမရှိ
မိုးညှင်းမြို့ပေါ်တွင် စစ်ဘေးရှောင်နေသည့် ဒုက္ခသည် ၅၀၀ ကျော် နေရပ်ပြန်ပြီ
လူမှုကွန်ရက်မှတဆင့် ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သော မစုဝေ ညှဉ်းပန်းခံရမှု ဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲ